Fepetra sy fepetra - Mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Mpisolovava amin'ny orinasa marijuana manana fahazoan-dàlana
Ny fampiasana an'ity tranokala ity dia ny fanekena ireo fepetra sy fepetra voalaza eto.
Mpanolotsaina indostrian'ny cannabis ("CIA", "isika", na "izahay") dia tsy mandray andraikitra amin'ny maha-marina na famaritana ny fampahalalana hita eto. Ny fampahalalana hita eto dia natao ho an'ny fampahalalana fotsiny ary tsy torohevitra araka ny lalàna. Tsy tokony hiantehitra amin'ny mombamomba anao ianao raha tsy mitady torohevitra matihanina.
Io fampahalalana io dia tsy mamorona fifandraisan'ny mpisolovava-mpanjifa. Tsy afaka ny hisolo tena anao izahay mandra-pitanay ny fisehoan-kevitra hisolo tena ny fifanolanana mahaliana na olana hafa.
Izahay dia tsy mifehy ireo rohy hypertext hita ao amin'ity tranokala ity, ka noho izany dia tsy afaka manao fisolontena momba ny kalitao na ny fahamarinan'ireo tranokala ireo, ary ny fampiasana ny tranonkala hyperlink toy izany dia tsy manohana anay. Izahay dia manome rohy hypertext ho an'ny fampitaovana sy ny fampahalalana.
Raha manapa-kevitra ny hividy fivoriana amin'ny dinidinika ianao, ianao no mpanjifanay ho an'ny tanjona tokana sy voafetra ao anatin'io varotra io momba ny asanao. Ny fifampidinihana toy izany dia tsy mamorona fifandraisan'ny mpisolovava amin'ny mpanjifa mihoatra ny tanjona voafetra amin'ny fanomezana toro-hevitra mandritra ny fotoam-pitsarana. Izahay dia hiaro ny mombamomba anao sy ny tsiambaratelonao amin'ny raharaha rehetra resahina mandritra ny fifampidinihana. Noho ny toetra voafetra amin'ny fivoriana amin'ny fifampidinihana, ny toro-hevitra rehetra omena ao dia tokony ho raisina ho toy ny torohevitra sy ny fifampidinihana ary tsy omena lanja ny hevitry ny lalàna feno.
Ny zon'ny mpamorona rehetra, ny mari-pahaizana ary ny zon'ny fananana ara-tsaina rehetra ao amin'ny tranokala sy ny votoatiny (anisan'izany tsy misy fetrany ny famolavolana tranonkala, ny soratra, ny sarin-tsary ary ny kaody rehetra momba ny rindrambaiko sy loharano mifandraika amin'ny tranokala) dia tompon'ny alalàn'ny CIA, na raha tsy izany. Nampiasain'ny CIA araka ny alain'ny lalàna.